Ikhaya | YOUCCO
Iminyaka engu-10 Imikhiqizo Yezikhwama Zobuchwepheshe
BCSI& I-ISO9001 eqinisekisiwe efektri
]Njengomenzi oholayo onolwazi olungaphezu kweminyaka eyi-10 eMkhakheni Wezikhwama, singochwepheshe ekunikezeni uhla olukhulu lwezikhwama, njenge-backpack, izikhwama zokuhamba, izikhwama zokuhamba, izikhwama zokuhamba, izikhwama zokuthenga njll.
Umsebenzi wethu ukwenza ukuhamba kwakho nokuphila kalula!
Ubhaka Owenziwe ngokwezifiso Ongcono Kakhulu Obonakalayo Ophakeme we-DS220502 abakhiqizi Abavela e-China | YOUCCO
Isikhwama Esingcono Kakhulu Esibonakalisa Ukubonakala Okuphezulu DS220502 uma siqhathaniswa nemikhiqizo efanayo emakethe, sinezinzuzo ezivelele ezingenakuqhathaniswa ngokusebenza, ikhwalithi, ukubukeka, njll., futhi sijabulela igama elihle emakethe.YOUCCO ifingqa ukukhubazeka kwemikhiqizo edlule, futhi njalo uzithuthukisa. Imininingwane ye-The Best High Visibility Reflective Backpack DS220502 ingenziwa ngendlela oyifisayo ngokwezidingo zakho.Lo bhaka uyisitayela sethu sakamuva sikajosaka esicwebezelayo, esifaka indwangu yegobolondo ecwebezelayo, kukhona indawo ehlala emathangeni ngaphakathi kwesikhwama, futhi efakwe ngaphakathi ukuze kungeneke kalula kuyo. Kukhona nephakethe loziphu elisheshayo ngaphambili elinelogo yenkampani.
Isikhwama Sokujima Esinesitayela Eseqophelweni eliphezulu Isikhwama Esihamba Ngayo Isikhwama Sokuzivocavoca Esinendawo Yezicathulo wholesale-Youcco
Lesi sikhwama sakudala se-qulity high gym/duffle siklanywe ngu-youcco.Kunamakhompathimenti amakhulu ama-2, elokugqokisa, elezicathulo.2 ukuthwala izindlela ze-tote kanye namahlombe aphambene.Ilungele izindawo zokuzivocavoca zansuku zonke noma izinsuku ezingama-2-3 zokuhamba.Uma unentshisekelo ngalesi sikhwama, pls ukhululeke ukuxhumana nathi ngeposi:bella@youcco.com noma uthumele imibuzo ku-inthanethi.
Isikhwama sezindlu zangasese zokuhamba ze-Unisex Hanging
SKU: PM80802 I-Classic Hanging Toiletry Bag Travel cosmetic Organisation Yesikhwama Sokugeza Isikhwama 1. UKUKHANYA KWAMANZI --- Kwenziwe kusuka kumathani amabili ama-600D polyester impahla 2. I-FABRIC YAMANZI-IXESHA LAMANZI --- Isikhwama sokuhamba se-makeup senziwe nge-polyester esezingeni eliphezulu. Gcina izinto zakho zomuntu zomile futhi zivikele ekuvuza, ekuchitheni nasekukheni. 3. ISAKHONO SAKHO SESIQINISEKISO SESIQINISEKISO --- Isikhwama sokugeza sakhiwa njengesakhiwo esihle sokubamba izinto eziningi zokuhamba, gcina izinto zakho zokuhamba zihlelekile futhi zahlukanisiwe, njengeshampoo, ilayisi, izimonyo namagiya okuhamba. 4. Ngegwegwe lokulengiswa odongeni 5. Ubungako: ukuvula u-19.5L * 9.5W * 39H cm kuvaliwe ngo-19.5L * 9.5W * 17H cm
]Kungani Sikhethe US?
]Ifektri yethu itholakala ku-Xiamen. Kukhona ukukhiqiza okuphelele kokusika, ukuthunga, ukuphrinta, ukuhlola, ukupakisha nokuthumela. Ifektri yethu ingafinyelela kuyunithi yenyanga engu-1,500,000. Sithole isitifiketi se-BSCI ne-ISO9001. I-Youcco ihlala ikhombisa ubuqotho bethu futhi wenze konke okusemandleni ethu ukulandela wonke amakhasimende. Ungathola impendulo yethu kungakapheli amahora angama-24 eqenjini lethu lenkonzo yamakhasimende.
Sine-R ekhethekile r&D UMnyango Wokusiza Kusukela ekuqaleni ukuze uqede. Siyaqiniseka ukuthi ungathola izikhwama ezifanele ezinhle kakhulu enkampanini yethu. Imikhiqizo ye-ODM ne-OEM yamukelekile kakhulu. Umsebenzi wethu ukwenza ukuhamba kwakho nokuphila kalula! Vele uthintane ne-YouCCO namuhla ukuqala isidingo sakho sobuso ngokushesha!
Ngomklamo wethu okhangayo, intengo yokuncintisana, ikhwalithi ephezulu, siye saba nobudlelwano bebhizinisi lesikhathi eside namakhasimende ase-US, e-UK, eJapan, eSouth Korea, eTurkey, eGibhithe nakwamanye amazwe.
Abalingani bethu abaphambili bakwaWalmart, QVC, i-HBC, i-Iceland, iDisney, Reisennel, Spar, GABS njll.
Ungayikhipha kanjani ilogo yerabha ezikhwameni? | Youcco
]"I-logo ikhonjiswe kanjani esikhwameni sami?""Ungeza kanjani ilogo yami esikhwameni, isikhwama esipholile?""Ngabe yinye indlela ye-logo yami yesikhwama ngaphandle kokuphrinta?"Amakhasimende amaningi amaningi asibuza.I-logo yangokwezifiso imvamisa iyindlela engcono kakhulu yokuhlukanisa umkhiqizo wakho kweminye imikhiqizo. Le vidiyo izokukhombisa ukuthi ungayenza kanjani ilogo yerabha ezikhwameni.
Ungaphrinta kanjani isithombe / isithombe ezikhwameni?
]"Ngingakwazi ukuphrinta lo mklamo omibalabala esikhwameni sami?" "Ngabe kukhona umehluko wombala phakathi komklamo wami nokubukeka kokugcina ezikhwameni""Hlobo luni lwezinto ezibonakalayo olutholakala ngokuphrinta okuvumayo"Ikhasimende lihlala linemibuzo efanayo lapho bedinga ukuphrinta okuthile okunemibala noma okuyinkimbinkimbi ezikhwameni noma yiziphi izikhwama ze-backpack / izikhwama ezipholile / izikhwama zesikole / izikhwama zokuhamba / izikhwama zokuhamba / izikhwama zokuhamba.Kule vidiyo, i-Youcco izokwethula indlela engcono kakhulu yokuphrinta izithombe noma izithombe ezikhwameni - Ukuphrinta okuvumelanayo.
Unjani umsebenzi wokuphrinta wesikrini ezikhwameni?
]"Uprings I-LOGO KANJANI EKUGCINA KWAMI?""Ungeza kanjani ilogo yami esikhwameni, isikhwama esipholile?""Ngabe ikhona enye indlela yokuphrinta kwesikhwama sami?"Amakhasimende amaningi amaningi asibuza.I-logo yangokwezifiso imvamisa iyindlela engcono kakhulu yokuhlukanisa umkhiqizo wakho kweminye imikhiqizo. Le vidiyo izokukhombisa ukuthi i-logo ejwayelekile kakhulu kangakanani-screen umsebenzi wokuphrinta wesilika ekukhiqizeni izikhwama zakho.
]I-Xiamen Youcco Ngenisa& I-Export Co, Ltd. Kusungulwe ngonyaka ka-2014. Singcweti ekunikezeni uhla olukhulu lwezikhwama, njenge-backpack, izikhwama ze-duffle, izikhwama zomhleli, izesekeli kanye nezikhwama zokuthenga.
Ngeminyaka yokuthumela obala ulwazi ensimini yesikhwama, sijwayelene kakhulu nesidingo emakethe. Izinto esizisebenzisayo zinobungane futhi zisebenza kabusha, zingadlula ezilinganisweni zokuhlola ezisuselwa kwisicelo esikhethekile sekhasimende.
Ngemiklamo yethu ekhangayo, intengo yokuncintisana, ubuchwepheshe obuthuthukile, ikhwalithi ephezulu kanye nensizakalo enhle kakhulu, sijabulela idumela elihle kusuka kumakhasimende ethu, iningi lase-USA, e-A Canada, e-Asia. Ifektri yethu itholakala ku-Xiamen. Kungamamitha-skwele angama-3000 kanye nabasebenzi abangama-80. Kunemishini ekhiqizayo ekhiqiza ngokusika, ukuthunga, ukuhlola, ukupakisha nokuthumela.
]Xhumana nathi ngesilinganiso samahhala manje!
]Uzothola impendulo kungakapheli amahora angama-24 eqenjini lethu lesevisi eliqeqeshiwe, kufaka phakathi ikhathalogi yethu yakamuva& Intengo engcono kakhulu!